သိန်းနိုင် (52), phyonaynaing (38), Min Maung, v1per9 (35), Zhang zi fu (35), သူကြီး, လွမ်းလှိုင်း (31), ဇင်လင်းဇော် (31), ကိုထွေး (30), maymyatlwin, ဦးသာကြီး (29), နေရည်ဝင်း (29), naysoeaung (29), နေ၀န်းနီ, machian (28), မိုးသန်. (28), APHYO25 (28), airzac (27), thetka (27), ZYMCOLE (27), မောင်အောင်မျိုးထွန်း (26), nyi min nyo, s.silverstar.7 (25), မင်းဇင်မျိုး (25), rosan (24), မောင်သားကြီး (24), sumith kushwaha (24), emeraldosiris, Thawngcunglian (23), ယမင်းသူဇာ (20) Birthdays
Khine Lwin (40), zion, ဇေဇေဇေဇေ, nyanwaiphyo (36), moenyithit, ဒေါ့ဇေယျ (35), kenaung khant, ဖြူစင်သန့် (34), phyusinthant (34), ကိုဌေး (34), eaksoe, မမလေး (32), thanzingabar88 (32), mmm (32), နိူင်သူအောင် (30), ငယ်ထွေး (30), လွှတ်ကျူး (30), sainaw (30), ngengehtwe (30), မနီလာဝင်း (29), ko naing (28), ကိုမျိုးကျော် (28), လရောင် (27), မိုးမင်းဟိန်း (27), powernavy (27), tinhtunaung (27), အဝင်းလေး (27), myowaimon (26), hayman (25), htatwaiyeaung (24), နေရှိန်းဦး (24), ပန်းအိဖြူ (24), zawminwin (24), tintnaing (24), နှင်းလဲ.ရည် (24), ဂဃ နဏ သိချင်သူ, Than Tun Aung, ထက်မင်းနိုင်, pyaepyae (23), ပြည့်ပြည့် (23), babymilo (23), sawpoekwalay (22), Douchenuzzle, smilegirl995 (20) Birthdays
ကိုလှမင်း (49), phonemaung (47), nayaungwin (43), နေပန်လင်း (43), hansoehtut (40), မင်းမင်းထွဋ် (40), aungkokolwin (39), ma thit, crazzy4 (35), leader (35), sumon1011 (35), ပုဂံ, judson (34), myaminthu (32), နိုင်လင်း84 (31), ဆန်းမောင်, မိုးခရမ်း (30), လူမိုက်, ကာတွန်း, အောင်ကျော်မင်း ခွန်လင်း, ma mai, မျိူးမျိူး (29), ♫♪ကြယ်စင်လင်းလက်♪♫ (29), starlight (28), ဖိုးသားလေး (28), starlight.ru (28), ဟိန်းနောင်စစ် (28), စစ်နောင် (28), နောင်စစ် (28), ဇင်ပြည့်ဖြိုး (28), maung (27), မောင်မောင်ပြည်ဖြိုး (27), yippeeshayilay (27), frozen (27), minzawthein (27), စိုင်းလှခင် (25), အောင်ကျော်ကျော်စွမ်း (25), စိုင်းနွမ်မိန်းခမ်း, kakashi.yz, အောင်ငြိမ်းထွန်း1234 (24), သားချို (24), နှင်းသန်ဒါ (24), ၀ိုင်းလေး (24), အိန်ဂျယ်လေး, waigyi (22), ရှင်းကိုကို (22), ဖြိုးအိစင် (22), paing.q95 (20), ZawMoe3219798 (17) Birthdays
ဦးသက်ဦး (54), unyomaung (51), shwe minoo (44), saw thantar, tin tin (43), ဖုန်းကိုကို (43), zabuhein, hlaingzayaroo (42), cooker (41), THET NAING THEIN (41), ကျော်သူထွန်းထွန်း (41), နိုင်ဝင်းစိုး (40), 1176san (39), မင်းင်းမင်းပိုက် (38), swe (35), လူစော (35), okcomputer, jedidvena, မှော်ဘီခိုင်ကြီး, wei khine, chitthu (33), myomint07 (33), phyophyooo (32), သန်းဟန်ဝင်း (32), မင်းသိုက်ခန့် , myintkoko (31), 734hlaing (31), ubachit (31), aungthuraATR84, thawkha012, rosewhite666 (30), spring2207@gmail.com (30), laikpyarlay2055@gmail.com (30), မေချို, မောင်သုည, Mr.Midnight (29), သားဇော် (29), innocent (29), Mr. Satt (29), KYAW MWD (29), Again, Mr.songlover, အရှင်ဇောတိ, soesoe (28), paywatsate (28), starsnow (28), wai yan min (28), myanmarmobilefamily (28), shweapple87 (28), မောင်ကျော်နိုင်စိုး, ကျော်ဇေ၀င်း (27), phoemulay (27), myatkoko.royalscorpian (27), heinmin (27), tanynekha (27), thetoo1988 (27), မိုးဆွေ (27), ဦးဦးဗျားဗျား, ချစ်ခွန်းညံ (26), ချစ်ခွန်းညံ (26), nmofnml (26), 1stpunkblack (26), aungzaw3 (26), Nickywin (26), အေးမိုင်ကျော် (25), Thawzin Hein (23), မောင်ဇော်ထက် (23), Heinhtetaung (22), မင်းသန်. (22), အောင်အောင်94 (21), Mrs.Min Thein (19), စွမ်းထက်အောငါ, sithumyohtaik Birthdays
nOv, thein khine, nnitar (40), နဂါးဟန်, sundaynyunt (37), မသီတာ (37), ဖွဲဇင်ဇင်, yemyint99 (35), လွင်ကိုလတ် (35), ohmlwin (35), မိုးစက်ရေ (35), MargaThagyar (35), ​ကျော်​စွာ, ko diamond, စစ်မာန် (30), soe nge (30), aungkooo (30), mohnmaungmaung (30), မောင်စိုးမိုးကျော်, lhwinn (29), ၀က်ဝံမလေး, johnthss08 (28), soemoe1112 (28), jaybee (27), အချစ်ကြီးသူကောင်လေး (27), တနိုင်းခ (27), အောင်မျီုးသူ, bluesk4, Aung Tun Oo (26), kyaw lwin moe (25), ၀တုတ်ပေါ (24) Birthdays
Naingshwelinn, တစ်နှစ်သုံး (47), machiavellianboy (46), kokoe, ၇န်နောင်လွင် (41), myat Lin, tinkokooo (39), တောင်စွန်းသား (39), naing lin76 (39), banbeelay, banbeelay11, မောင်လွမ်းငို (38), မမြကလေး, Bo Khayan, Ko Maw (35), little rabbit (34), နေမင်းကို (33), thaemarlwin, desmannaung, BikeKaLay (32), စိုးရန် (32), meenovember (32), ဦးမြင်းကြီး (32), okker aung (32), shwehintar, friendship1984, DuDu_13, မိုးအောင်, yarthein (30), ဇေဇေ (30), စောဝင်းတိုး (30), skyster (29), ဇေယျာဝင်းကျော် (29), Ba Gyi Phyo (29), အာရကန်သား (29), iPod, မင်းဇော်သိုက် (28), superkk (28), kophyoe (27), ဆေး (27), အောင်မြင်, shweoke1989 (26), အလင်းဇက် (26), ဖီး<လ်> (25), ကောင်းကင်ပြာ (24), မောင်သူရကိုကို (21), aungkyawnyein (17), ပန်းသီးလေး, ကောင်းမွန်ခန့် (15) Birthdays
Zay Yar Hlaing (43), scropianman, thinzar79 (36), hlamyoswe, donbradlay58111 (35), သူရဟန် (35), noeljuvenile, နိုင်လင်းထွန်း, အောင်ဖြိုးထွန်း (33), vanboi (33), novembergirl, phyulay2011 (32), sweet007 (31), jetmoewar (31), dasepo (31), yan.myo.aung (31), athaylay (31), moscowday01 (31), ကိုလှမျိုးနိုင်, Pyaephyolin (30), မောင်ပြည့်ဖြိုးလင်း (30), ကျော်သူရ၁၉၈၅ (30), khamyu11 (30), spychitu (30), moe yan (30), death (30), မြူမင်းလွင်, theinzlatt (29), စိုးကို (29), နန်းရွှေဦး (28), သွယ်သွယ်မိုး, htethtoo (27), dolta, ဝင်းကိုအုန်း (26), သျှားယု, narutorain (24), phyolinhtet, TunLynn, အိအိဖြိုး (22), အေးချမ်းလေး (22),ှphoenix (21), pyisonethu20 (15) Birthdays